Ololaha dib-u-warshadaynta, sida loo abaabulo mid u noqda guul? | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | | Hoyga Cagaaran, Deegaanka
Dhamaanteen waan abaabuli karnaa a dib-u-warshadaynta magaaladdeena, maadaama ay caadi tahay in aysan jirin wax barnaamijyo ah oo ku saabsan kala-soocidda, ururinta iyo dib-u-warshadaynta dhammaan qashinka la soo saaray.
Taasi waa sababta dugsiga, NGO, naadi, shirkado iyo hay'ado kale ay u abaabuli karaan ololeyaal dib-u-warshadaynta oo kor u qaadaya dib-u-warshadaynta dhammaan noocyada qashinka. Haddii aad rabto inaad abaabusho mid, waa kuwan tilmaamaha la raacayo.
1 Talooyin ku saabsan olole dib-u-warshadayn guul leh
1.1 Sideen ugu fulin karnaa olole dib-u-warshadaynta dugsiga?
2 Sidee loogu dhiirrigeliyaa dadka inay dib u warshadeeyaan?
2.1 Waa kuwee qaybaha kor u qaada ololaha bulshada sida dib -u -warshadaynta?
3 Sidee ayay tahay in dib loogu warshadeeyo?
4 Maxaan sameyn karnaa si aan u horumarino dib-u-warshadaynta qashinka?
5 Sidee loo abuuraa olole ururinta qashinka?
Talooyin ku saabsan olole dib-u-warshadayn guul leh
Si ololaha dib -u -warshadaynta lagu guulaystotilmaamaha qaarkood waa in lagu xisaabtamo sida:
Ololayaasha dib-u-warshadayntu waxay leeyihiin wakhti go'an oo bilow ah iyo dhammaad ah, haddii aan loo beddelin barnaamijyo. Waxaa jira taariikh bilow ah iyo taariikh dhammaad ah.
Wanaagsan isgaarsiinta Aagga ololaha loo qorsheeyay, waa in lagu adeegsadaa dhammaan noocyada kala duwan ee warbaahinta sida boodhadhka, xayeysiinta, shabakadaha bulshada, albaab ilaa albaab, iyo kuwa kale.
Sii macluumaad cad marka aad faafineyso ololaha si qof walba uu u fahmo fariinta iyo sida loo fulinayo.
Kahor intaadan bilaabin ololaha, waa inaad maareysaa waxa lagu qaban doono qashinka ama alaabada la aruuriyay.
Kaqeybgal dhamaan qaybaha bulshada iyo bulshada si runta looga dhigo guul.
Sii ikhtiyaarrada iyo qaababka kaqeybgalka muwaadiniinta si dad badani ay ula shaqeeyaan.
Marka ololaha la soo gabagabeeyo, natiijooyinka waa in lagu soo wargeliyaa warbaahin kala duwan si kuwa ka qayb qaatay ay u ogaadaan sida ay ku dhammaatay iyo waxa lagu guuleystay.
Ololeyaasha dib-u-warshadaynta waa la soo celin karaa laakiin way ku habboon tahay in hal-abuur la yeesho oo si ka duwan sidii hore loo la xiriiro.
Ololaha dib-u-warshadayntu waxay noqon kartaa mid maxalli ah, heer gobol ah iyo xitaa mid heer qaran ah. Waxay diiradda saari karaan badeecooyin tiro badan ama waxyaabo qashin ah laakiin aan loo tuurin sida ay wax u soo saari lahaayeen wasakheynta ku darsiga hantida.
Dib u warshadaynta waa inay noqotaa habka ugu weyn ee lagu maareeyo qashinka, magaalo kasta, magaalo kasta iyo dal kasta dib u warshadeynta waa in la dallacsiiyaa. Sidan ayaad ku ilaalin doontaa deegaanka.
Olole dib u isticmaal wanaagsan waa inay kor u qaadaan wacyiga oo wargeliyaan baahida dib -u -warshadaynta oo ay ku siiyaan macluumaad ku saabsan sida loo sameeyo.
Weligaa ma abaabushay olole dib-u-warshadaynta? Tallaabooyin noocee ah ayaad qaaday si aad u abaabusho?
Si aad u buuxiso, ha ilaawin inaad sharraxdo macnaha midabada ku yaal qashinka dib-u-warshadaynta:
Sideen ugu fulin karnaa olole dib-u-warshadaynta dugsiga?
Dhiirrigelinta dib-u-warshadaynta laga bilaabo da'da hore badiyaa waa ikhtiyaar weyn si ay ugu soo bandhigaan caadooyinkan nolol maalmeedkooda. Haddii aan carruurta barinno inay dib-u-warshadaynta ka sameeyaan da'da yar, waxaan ka caawinnaa inay si toos ah ugu sii wadaan mustaqbalka. Aynu aragno furayaasha si olole dib-u-warshadaynta dugsigu si fiican ugu shaqeyn karo:
Bar 3Rs iyo muhiimadooda
Ka bilow nidaamka dib-u-warshadaynta fasalka
Bar oo u qoondee weelasha si aad u keydiso dhammaan qalabka loo isticmaalo farsamada gacanta
Dib u isticmaal dhammaan walxaha loo isticmaali karo meelo kale
Samee nashaadaad si carruurtu u isticmaali karaan waxyaabaha dib loo rogay
Sharax muhiimadda ay leedahay in gacmaha la maydho ka dib marka dib loo isticmaalo qalabka
Abaabulaan safarro hagitaan ah ee dhirta dib-u-warshadaynta deegaanka
Sidee loogu dhiirrigeliyaa dadka inay dib u warshadeeyaan?
Si aad ugu dhiirrigeliso dadka inay dib u warshadeeyaan, waa inaad ku dhiirrigelisaa nooc ka mid ah abaalmarinta. Waad dooran kartaa inaad abuurto olole tabarucaad si aad u dhiirrigeliso dhaqanka aanad isticmaalin warqad ama baakado haddii aan loo baahnayn. Si si wax ku ool ah loo kala saaro qashinka, waxaa muhiim ah in tan loo helo haamo dib-u-warshadayn oo ku filan.
Waad siin kartaa alaabta carruurtu ku ciyaarto, dharka iyo buugaagta aan kuu adeegin si qof kale uu mar kale u isticmaalo. Waxa ugu fiican ayaa ah in lala socodsiiyo dhammaan ficiladan oo lagu dhiirrigeliyo in la gaaro nooc ka mid ah ujeeddooyinka si loo yareeyo saameynta deegaanka ee howlaha maalin kasta.
Waa kuwee qaybaha kor u qaada ololaha bulshada sida dib -u -warshadaynta?
Si aad u hesho dad badan oo dib u warshadaynta Had iyo jeer waa wax xiiso leh in lala xiriiro ururada aan dowliga ahayn, xarumaha waxbarashada, ama xitaa xarumaha isboortiga kuwaas oo ah qaybaha ku siin kara kaalmada ugu badan, laga yaabee inay ku siiyaan qol aad shirarka ku qabato sidaasna dadka ku baraarujiso, ama adigoo boodhadh ku dhajinaya, tusaale ahaan.
Sidee ayay tahay in dib loogu warshadeeyo?
Si sax ah dib-u-warshadayn waxaa muhiim ah in si fiican loo ogaado qashinka, nuuca uu yahay iyo halka ay tahay in la dhigo. Qashinka inta badan ka soo baxa guryaheena maalin walba waa xirmooyin, caagag, warqad, kartoon iyo dhalo. Dhammaantood waa in laga soocaa qashinka dabiiciga ah laguna shubaa weelladooda.
Intaas ka dib, waa in aan ogaanno waxa qashinka halista ah ama sunta ah uu yahay iyo halka lagu keydin karo. Tan awgeed, waxaa jira konteenaro gaar ah, kuwa baytariyada, saliida la isticmaalay iyo meelaha nadiifka ah ee magaalooyinka.
Maxaan sameyn karnaa si aan u horumarino dib-u-warshadaynta qashinka?
Si loo hagaajiyo dib-u-warshadaynta qashinka, waxa muhiimka ahi waa in la tababaro wanaagga oo la ogaado waxyaalaha kala duwan noocyada weelasha jira. Waxaan sidoo kale awoodnaa weydiiso golayaasha deegaanka inay hagaajiyaan nidaamka qashinka, fududeynta dhigaalka iyo uruurinta isla. Tan ugu muhiimsan dhammaantood waa in la yareeyo isticmaalka si loo hagaajiyo waxtarka iyo isticmaalka alaabta ceeriin.
Sidee loo abuuraa olole ururinta qashinka?
Tallaabooyinka la raacayo waxay la mid noqonayaan in ka badan ama ka yar sidii haddii aan rabno inaan abuurno mid dib -u -warshadayn ah; yacnii, waa inaan dhignaa weelasha ku habboon oo aan sharraxnaa meesha qashin kasta tago. Maxaa ka sii badan, waxaa muhiim ah in kor loo qaado wacyiga, ama muujinta fiidiyowyo iyo / ama sawirrada wasakhda ka jirta meeraha, iyo saamaynta ay ku leedahay dabeecadda iyo nafteena.
Waxaa si gaar ah xiiso u leh in laga bilaabo xannaanooyinka ama dugsiyadaWaxaa la ogyahay in marka carruurtu ay wax ka bartaan da 'yarta si ay u daryeelaan bay'ada, waxay u badan tahay inay sidaas sii wadaan markay weynaadaan.
Si yar -yar, mid walba wuxuu gelinayaa badarkiisa ciidda, waxaan awoodi doonnaa inaan helno Dhul nadiif ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Kaydinta tamarta » Hoyga Cagaaran » Ololaha dib u warshadaynta
Mahadsanid Adriana, warku waa mid aad uqurux badan, waa inaan mowduucan ka raadiyo google maxaa yeelay waxaan rabaa dadka reer Costa Rica (dalkayga) inay ku baraarugsanaadaan waxaas, oo hadii aad doorbido, raadi "rio virilla costa rica ", Waxayna ka soo bixi doonaan war aan fiicnayn oo ku saabsan qashinka si murugo leh loogu tuuray wabiyada.
Runtii waan jeclahay waxa ku qoran maxaa yeelay habkaas ayaan dib u isticmaali karnaa
Gabriel Castillo sawirka meel dijo
Wanaagsan! Waxay saldhig u ahayd qorshaynta olole ka socda shirkadda aan u shaqeeyo.
Ku jawaab Gabriel Castillo
Sidee loo ururiyaa kheyraadka deegaanka?
Andrea yulieth lopez dagaal qarsoodi ah dijo
Macluumaadkani wax badan ayuu i caawiyay mahadsanid adrian
Jawaab Andrea yulieth lopez dagaal qarsoodi ah
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan helo taageero iyo macluumaad si aan qashinka ugu shubo shaqadeyda. Waxaan isticmaalnaa caag badan waxaanan jeclaan lahaa inaan in yar ka caawiyo meeraha.
Waad salaaman tihiin maalin wanaagsan; Xaafadeena gudaheeda, waxaan ku abaabulaynaa kala soocida qashinka oo leh dhibco cagaaran.
Anaga ayaa sameysanay, waxaa lagu ridi doonaa hal meel, (batteriga ka kooban 15 kiish) waxaan ku raacsanahay shirkada qashinka iska saareysa, waxaan dhigi doonaa kamarad kontorool ah oo aan sixi doono midka sida khaldan u sameeya.
Talo, macluumaad noocee ah ayaan ku hageynaa deriska, si uu u ogaado meesha qashinka loo dhigo, iwm.
Aad baad ugu mahadsantahay waqtigaaga.
Ku jawaab Robeto